နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > ဖန်လုံအိမ်ရုပ်ရှင် > China Film Green House
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ်သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်စျေးအသက်သာဆုံးသောရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးဘက်စုံစီးပွားဖြစ်ဖန်လုံအိမ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးဖန်လုံအိမ်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောသော့ခတ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်သောပူနွေးသောအလွင့်စင်ခြင်း။ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများ။ တရုတ်နိုင်ငံ၏စိမ်းလန်းသောအိမ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလေနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအပူ dip dip galvanized stee နှင့်အတူတက်ခဲ့သည်
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် is the cheapest hot sale in China Agricultural multi-span commercial Greenhouse
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် with high quality, widely use for high wind and heavy snow area. It was made up with hot dip galvanized steel frame and covering UV anti-aging film.
2.Product Parameter (Specification) of တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ်
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် Widely application for planting vegetable, tomatoes, sweet peppers, cucumber, watermelon, planting flowers roses, have many features like:
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် with bigger space and enhance the land utilization. Many big agriculture machine can work in side. The kind greenhouse suitable for agricultural vegetable tomatoes, cucumber and flowers planting.တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် outer shading system, inner shading system,cooling system, heating system, irrigation system to make the best suitable greenhouse environment. The greenhouse can effectivly prevent the loss of heat and prevent the flow of cold air and heat dissipation.
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် is more conducive for the falling down of rain and snow. It reduces the wind resistance ,improve the anti load capacity of the greenhouse; also it reduces the dew drops and the incidence of pathogens caused by excessive humidity.ဖန်လုံအိမ်သုံးစွဲသူများသည်ဖန်လုံအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချိန်ညှိရန်အတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများအရရှပ်တာ၏နံပါတ်နှင့်အမြင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ဤဖန်လုံအိမ်သည်မိုးရေများချက်ချင်းစီးဆင်းစေရန်ကြီးမားသောမြောင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။
A) တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် have many advantages:
- ဖန်လုံအိမ်အမျိုးအစားအားလုံးတွင်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။frame ကိုပစ္စည်း
အနှစ် ၂၀ သက်တမ်းရှိပြီးသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ၂၇၅ ဂရမ် / ၂၊ ခိုင်ခံ့သောမာကျောမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောစွဲကပ်မှုရှိခြင်း၊ သံမဏိကိုယ်ထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
B）တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် covering material is clear PO film, famous brand, more durable, guaranteed5years using life. 150 micros and 200 micros is popular. Color have white and blue for choose.
C) တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် optional systems for customers choose according to the local conditions and what kind of crops planting.
၁။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းဖြင့်ဆည်မြောင်းနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာရေသန့်စင်ခြင်းစနစ်သည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ဤအတောအတွင်းသီးနှံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ၂။ အထူးသဖြင့်ရေအရည်အသွေးမကောင်းသောသီးနှံနှင့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသည့်forရိယာအတွက်သင့်တော်သည်။ ၃။ အဆင့်မြင့်ကုသမှုကိုဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆည်မြောင်းစနစ်ကိုအဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် with good quality with SGS certificate
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် delivery by container in bulk, we always delivery on time to meet our client requirements.
တရုတ်ရုပ်ရှင်စိမ်းလန်းသောအိမ် from Jianda Greenhouse Company Welcome to our factory to haveavisit and any inquiry.